"Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; handeha izy, nefa tsy ho reraka. Isaia 40:31 Miampy hery eny am-pandehanana izy." Salamo 84:7
“Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana” (2 Timoty 3:16). Ny fomba namahanan’i Jehovah ny Zanak’Israely tany an’efitra dia ohatra iray amin’ireo sarisary ampiasain’Andriamanitra ampianarana antsika.
Raha vao maraina Jehovah dia nandefa ny mana avy any an-danitra, izay sakafo feno nanome ny hery ilaina ho amin’ny tontolo andro. Tsy maintsy nanangona izay nilainy ho an’ny ankohonany ny tsirairay, alohan’ny handevonan’ny masoandro izany. Toy izany koa, aoka isika isa-maraina hanokana fotoana hamakiana ampahany ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, mba hahitana indray ireo fahatsaran’i Kristy sy ireo fahatsaran’ny fiainany feno fahafoizan-tena. Hilaintsika ihany koa izany eo amin’ny fifandraisana amin’ireo manodidina antsika. Aoka izany hatao alohan’ny hibahanan’ny asa aman-draharaha andavanandro ny fotoana sy saintsika.
Tsy afaka nanangona ho an’ny ampitso ny olona, satria tsy azo notehirizina ny mana. Toy izany koa, tsy maintsy mifandray isanandro amin’Andriamanitra isika. Tsy hanangonana fahalalana tsy akory, fa hahazoana, isanandro isanandro, izay hery tiany homena antsika. Nandritra ny efapolo taona naharetan’ny famakivakiana ny taniefitra, dia nisy hatrany ny mana. Mandra-pahatongantsika any an-danitra, dia aoka isika hatoky fa tsy hiova Andriamanitra. Tsy hoe nanome tahirin-kery hampiasaina mandritra ny androm-piainantsika tsy akory Izy, fony isika niova fo, fa eo mandrakariva kosa Izy, rehefa ilaintsika. Aoka hizatra hanovo ny hery vaovao ilaina isanandro, eo amin’ilay loharanon’ny fitiavany, loharano tsy mety ritra.